PyRenamer: Oke faịlụ renamer | Site na Linux
PyRenamer: Aha nnabata faịlụ
Ama m onye kporo onwe ya KZKG ^ Gaara na-amasị gị itinye faịlụ niile na kọmputa gị, ihe dị ka nke a: faịlụ– = KZKG ^ Gaara_Collection = -. jpg. Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe amata mgbagwoju anya ma ọ bụ ụfọdụ trauma 😀
Agbanyeghị, njakịrị n'akụkụ aside pụrụ iche n'echiche inwe na-etinye tagline - = KZKG ^ Gaara_Collection = - ruo ọtụtụ narị foto na aka? Ọ ga-abụ ihe na-agwụ ike. Ọ bụ ya mere anyị nwere ike iji ngwaọrụ dịka nke m na-egosi gị taa: PyRenamer.
Dị ka aha ya pụtara, PyRenamer bu ihe edere na Python nke na - enyere anyị aka ịmegharị aha ọnụọgụ ọ bụla nke faịlụ n'otu oge. Nhọrọ gị dị ọtụtụ, yabụ enweghị m ike ịkọwa ha niile, ya mere ana m akwado ka ị wụnye ya ma nwaa ya n'onwe gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » PyRenamer: Aha nnabata faịlụ
Echere m na ọ bụ ya mere ha anaghị ahụ "faịlụ nzuzo" ndị ahụ na m maara na ọ nwere hahaha. You na-agba asịrị maka kọmputa ... ị werela ya dịka nwa nwoke? LOL
Ọfọn, usoro ihe omume ahụ yiri nke ọma, yana dịkwa ọkụ
Hahaha ekwesighi m ikwu ihe obula. N'ime netwọkụ Cuba niile ebe faịlụ dị nke Alejandro, o nwere - = KZKG ^ Gaara_Collection = - ...
Na ee, ìhè ma dị ike !!!
Achọghị m nke a, ihe dị mfe [F2] dị na KDE m zuru ezu na ọtụtụ 😉
Ọ bụghị oge mbụ m na-ahụ ngwa a, mana m ka na-eche ihe m nwere ike iji ya: D, ya bụ, amaara m ihe eji ya, mana maka m ọ baghị uru.
Jụọ KZKG ^ Gaara ihe eji ya nwere ike itinye ya na haha.
Ọ dabara na ọ bụ naanị m na-eji kọmputa a n'ihi na ọ bụghị na m ga-ahụ onwe m ka m na-etinye obere aha ka ha wee ghara ịhụ ihe m dinara.
Ma ọ bụghị m, ọ baghịkwa uru
Aha ahụ abụghị ihe iju anya ma ọlị, ọ dị ka akara na faịlụ a bụ nke ya.
Chei, dị ka obere aha m pụtara aha ọ bụla ọ bụ, ọ bụghị nke ahụ
Njehie ... ugboro ole m ga-akọwara gị ¬_¬
Na MCAnime.net ọtụtụ afọ gara aga, etinyegoro m ọtụtụ ihe, otu n'ime ụkpụrụ a na-eji mgbe mmadụ bulite faịlụ X bụ itinye ntụnye maka onye bulitere ya, ma ọ bụrụ na mkpesa, ajụjụ, echiche, aro ma ọ bụ ihe N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ị maara onye ị ga-akpọtụrụ.
Obu omenaala nke m ka nwere.
Echere m .. Post Traumatic MCAnime ...
Elav ka ihu Ọnwụ Mara ugbu a!
Ike gwụrụ ịhụ ya ... ¬¬
Maazị Alejandro, ị ga-etinye usoro ọhụrụ na nwoke a
Ọnye na -bụ Luis Giardino? dijo
Ọ dị mma, achọpụtara m na ọ na-atọ m ụtọ, mana m na-eji nke na-edegharị ma na-edochi aha, ihe atụ mgbe ị na -e theomi foto site na igwefoto m na kọmpụta nke sitere na dcss001 gaa na otu chida001, enwere otu na-eme nke ahụ, ebe ọ bụ na mgbe ị na-eji mmemme ibubata foto m ikewapụ ha site na ụbọchị. enwere ma ọ bụrụ na ha maara na e nwere ha gwa m biko ...
Zaghachi Luis Giardino
PyRenamer na-eme nke ahụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ugbu a, ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ usoro akpaghị aka, ọ dịghị ihe ọzọ karịa i thanomi site na igwefoto na PC, gbanwee aha faịlụ ndị ahụ, echere m na ị ga-eji njikwa ahụ nke ukwuu lot
Lee wụnye ọnwaNke a bụ ihe njikwa faili dịka Nautilus, mana mgbe ị wụnye ya, ọ ga-etinye ngwa iji nyegharịa faịlụ, ọ dị mma ... ị nwere ike iji ya rụọ ọrụ ebube, mee ihe ị na-ekwu na ọtụtụ, ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Nke a doro anya ma ọ bụrụ na ị na-eji Gnome, ma ọ bụrụ na ị na-eji KDE wụnye KRename, dị ka mma 😉
OK daalụ ..
na imata m na-eji Linux Mint 11 Katya ebe m na-ahụ blọọgụ a kwa ụbọchị ma amalitere m ịza ajụjụ ... 😀
Ọ dị mma, izute Luis, m na-eji ArchLinux ma elav na-eji LMDE ma ọ bụ Debian 😀
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ nsogbu ọ bụla, ka anyị mara, anyị ga-enyere gị aka ruo ókè anyị nwere ike 😉
Na ọnụ ya: Mpikota onu ma decompress faịlụ
Mbugharị na Cuba ma ọ bụ akụkọ ifo?